Hindise looga hortagayo guurka qasabka ah ee dhalaanka oo la qorsheeynayo | Somaliska
Dhalaanka aan qaan gaarin misna sheegtay ineey guur qasab ah soo mareen, ayaa haatan xarrumaha arrimaha bulshadda waxaa ka heeysta wel wel ah sideey ula dhaqmi lahaayeen dhalaankaasi.
Xarrumaha arrimaha bulshadda ayaa waxeey iminka baadi goobayaan jawaabo la xirrriira arrimahaasi.
Dowladda ayaa dhinaca kale waxaa lugu wadaa ineey dhawaan soo bandhigto hindise cusub ee ka hortagaya guurka qasabka ah ee dhalaanka.
” Tani waa su’aal u baahan inaan eeggno ka wasiir ahaana horey ayaan u wargeliyey. Waxaan sameyneynaa istiraajiyad la xirriira guurka carruuraha, lana imaan doono talaabooyinka ka dhanka ah tacadiga, dil sharafeedka carrruuraha ” ayey tiri wasiiradda dhalaanka iyo sinnaanta Åsa Regnér, oo waramayeysay idaacadda wararka faafisa ee Ekot.
Mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa kordhay dhalaanka aan qaan gaarin ee soo maray guur qasab ah ama ah-ba. Laanta socdaalka ayaa sheegtay ineey cadeeysay 129 iyo 3 wiil gabdhood oo guur qasab ah lugu sameeyey, balse tirro kale oo intaa ka badana ay jiraan.
Hey’adda Koox xirfad awoodeedka Qaranka ee Nationella kompetensteamet, ee fadhigoodu yahay Östergötland oo ay dowladda ku howl gelisay ka shaqeynta arrimahaasi iyo su’aalaha la xirriira guurka carruuraha, ayaa sheegay ineey diyaar u yihiin siddii tageero dhinaca is gaarsiinta ka geeysanayaan iyagoo la shaqeyna dhamaan hey’adaha ka shaqeeysa ka hortaga guurka qasabka ee carruuraha.
Dalka Iswiidhan waxaa ku nool gabdho boqolaal gaaraya kuwaas oo ah ajaanib magangalyo doon ah oo lugu qasabay guur eeysan raali ka aheyn. Sidaas waxaa aaminsan Mikael Thörn oo ka tirsan kooxda awood xirfadeedka Qaranka ee Nationella kompetensteamet. Wuxuu sidoo kale sheegay in sanadkaan horaantii in dalka soo galeen 14 gabdhood oo aan qaan gaarin oo loo guuriyey ra ka da’weyn.
Ugu dambeyntii dalka Iswiidhan waxaa u yaala sharci gebi ahaanba diiday guurka qasabka ah ee gabdhaha aan qan gaarin. Sidaas daraadeed waxaa ay dowladdu iminka wadaa qorshe ay ku dooneeyso siddii wax looga qaban lahaa guurka qasabka ah, gaar ahaan kuwii dalkaan soo galay iyagoo xaasas ah, hadana aan qaan gaarin oo weli carruuro ah.
Asc dadki 2 sano lagu heestay yaa qof akhbaar haayo arkay. Mase kuli ogolaasho aa hesheen??????????!!!!!!!!